JAVA အကြောင်းလေး​ပြောပေးကြပါဦး - MYSTERY ZILLION
September 2011 edited September 2011 in Java
J2SE နဲ့ J2EE ကို ကောင်းကောင်းမခွဲတတ်လို့ပါ
J2SE မှာ ဘာအကြောင်းအရာတွေဘယ်အပိုင်းတွေပါတယ်
J2EE မှာ ဘာအကြောင်းအရာတွေဘယ်အပိုင်းတွေပါတယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ
Java SE is Java Standard Edition - contains the basic set of Java development tools, like the Java compiler and interpreter.
Java EE is Java Enterprise Edition - contains an extended set of tools for Java development, particularly for large-scale applications. It is often compared to .NET Framework (from Microsoft) by the set of tools and libraries it offers.
Java ME is Java Micro Edition - contains the set of tools to develop applications for Java-enabled mobile devices.
JavaFX isaset of tools to create interactive (rich) Internet and Desktop applications, that can contain different multimedia content.
Forabeginner, Java SE is enough in my opinion. When you advance, you can use the Enterprise version.
reference : http://www.dreamincode.net/forums/topic/83165-versions-of-java/page__hl__enterprise
thanks ko saturngod
အကြမ်းဖျင်းပေါ့ (ဒါမှမဟုတ်) လူပြိန်းနားလည်အောင် အရှင်းဆုံးပြောရရင် SE ဆိုတာက များသောအားဖြင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်း ဒါမှမဟုတ် သေးငယ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ.တစ်ခု သုံးဖို.လောက်ရေးတဲ့ Environment တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို. ထင်ပါတယ်။ Swing ကိုသုံးပြီးတော့။ EE ကတော့ Web application တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာ Web Application နော် Web page မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ SE နဲ.ပါတ်သတ်လို. သင်တန်းမှာလောက်ပဲ လုပ်ခဲ့ဖူးတာပါ။ အခု Java EE ကိုသုံးပြီး Web Application တွေကိုရေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် SE နဲ.ပါတ်သတ်လို.တော့ သေချာမပြောနိုင်ပါဘူး။